यी कमेडियनको घरमा एक जोर चप्पल मात्र थियो...
एजेन्सी । बलिउडका चर्चित कमेडियन हुन् सुदेश लेहरी । उनले जीवनमा धेरै उतारचढाव देखे । समय त्यस्तो पनि थियो जब उनी एक दिनको एक रुपैयाँ तलबका लागि काम गर्थे ।
अष्ट्रेलियामा नेपालीले नेपालीलाई नै यसरी ठग्न थालेपछि...
सिड्नी । पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीहरुको उच्च शिक्षाको प्रमुख गन्तव्य अष्ट्रेलिया रहेको छ । वर्षेनी हजारौँ विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलिया अध्ययनका लागि आउने गरेका छन् ।
विश्वका केही यस्ता आश्चर्य लाग्ने १० बिलडिंङहरु
भवन कस्तो हुनुपर्छ ? तपाईलाई के लाग्छ ? विश्वका विभिन्न कुनमा रहेका इन्जिनियरहरुले केही यस्तै नौलो काम देखाएका छन् । उनीहरुको मास्टरमाइण्डका कारण उनीहरु तथा उनीहरुले बनाएको बिलडिङले विश्वभर चर्चा पाएका छन् । प्रकृतिमा रहेका सिमाबिहिन चमात्कारलाई समेत चुनौती दिएको केही विश्लेशकहरुको भनाइ समेत रहेको छ ।
यदि घरमा बास्तु मिल्ने हो भने अशान्ति र दुख कहिल्यै हुदैँन !
थाहा पाउनुहोस् महिलाहरुले कस्ता कामहरु गरे घरमा समृद्धि आउँछ
बलिउड अभिनेताहरुका महँगा घरहरु, कसको घरको मुल्य कति ?
परमाणु विस्फोटबाट मानिसलाई जोगाउने यस्ता घर !
'मेरो घर नभत्काउ, म यही मर्न चाहन्छु'
प्यालेस्टाइन । जेरुसेलमको दक्षिणतर्फ इजरायलको भनाईमा “गैरकानुनी रुपमा बनाइएका” प्यालेस्टिनी समुदायका घरहरु सोमबार बिहानैदेखि इजरायली सेनाले भत्काउन शुरु गरेको छ । घर भत्काइएको उक्त घटनाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै चासो व्यक्त गरिएको छ ।